Global Voices teny Malagasy » Atsaharo ny tsimatimanota, alalaho ny fanehoankevitra! · Global Voices teny Malagasy » Print
Atsaharo ny tsimatimanota, alalaho ny fanehoankevitra!
Voadika ny 17 Novambra 2019 18:30 GMT 1	 · Mpanoratra IFEX Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge, GV Mpisolovava
Ankalazaina ny 2 Novambra ny Andro Iraisam-pirenena natao Hanatsaharana ny Tsimatimanota ho an'ireo Heloka bevava atao amin'ny Mpanaogazety. Sary avy ao amin'ny IFEX.
Ity op-ed  ity dia nosoratan'i Annie Game, Lehibe Mpanatanteraka ao amin'ny IFEX , ilay tambajotra maneran-tany mampiroborobo sy miaro ny fahalalahana haneho hevitra sy hahazo vaovao. Averina avoaka izy io anatin'ny fifanarahana fiarahamientana eo amin'ny Global Voices sy ny IFEX. Teto  no nivoahan'ity lahatsoratra ity voalohany.
Alaivo sary an-tsaina ny tontolo iray tsy misy tsimatimanota, izay ahafahan'ny rehetra mampihatra ny zony haneho hevitra sy hahazo vaovao ary afaka miditra, mamokatra ary mizara hevitra sy vaovao amin'ny fomba rehetra izay safidiany, tsy misy tahotra. Manonofy izany izahay.
Amin'izao Andro Iraisam-pirenena natao Hanatsaharana ny Tsimatimanota ho an'ireo Heloka Bevava Atao Amin'ny Mpanao Gazety izao, zava-dehibe ny manaiky ny fifandraisana lehibe eo amin'ny zo haneho hevitra sy ny zo hahazo vaovao. Ireo mpanaogazety no matetika lasibatra voalohany rehefa misy amin'ireo zo ireo voahitsaka, ary any am-para, lasa lasibatr'izany avokoa isika rehetra.
Roa herinandro lasa izay, nifidy ny hanambara ny 28 Septambra ho Andro Iraisam-pirenena Ho an'ny Fahazoan'izao Tontolo izao Vaovao ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana. Fandresena goavana izany taorian'ny fanandratam-peo naharitra folo taona nataon'ireo vondrom-piarahamonim-pirenena maro, ahitana mpikambana Afrikanina maro tao amin'ny tambajotra IFEX.
Mety tsy dia niraika firy tamin'io vaovao mikasika ny Andro vaovaon'ny Firenena Mikambana io ny olona sasany — na dia mety tsy hahitàna na singan'olona iray tafiditra anatin'ny ady ho an'ny fampiroboroboana sy fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra aza. Kanefa tokony hamerina hisaina izy ireo, satria tsy afa-misaraka ny zontsika haneho hevitra sy ny zontsika hahazo vaovao, ary samy mitombo hatrany ny fanafihana azy roa ireo.
Amin'ny endriny maro samihafa no isehoan'ireo fandrahonana atao amin'ny fampahalalambaovao, miainga amin'ny fanafihana ireo mpanao gazety , hatrany amin'ny fanaovana fanahy iniana ny filazana vaovao diso , sy ny fanakatsakanana ireo gazety , ary midadasika be ny vokatr'izany: manakana ireo olona tsy handray izay vaovao ilainy mba hamahàna ireo olana misy lanjany aminy, manamafy ny fibodoana ara-politika, ary mandrava ny demokrasia.
Ndeha haka ohatra malaza vao haingana amin'ny herin'ny fanehoankevitra, ary ny fiankinan'izany amin'ny fahazoana vaovao.
Tamin'ny volana lasa teo, olona teo amin'ny 6 tapitrisa teo no nidina an-dalambe  ho valin'ny krizin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Namporisika olona maro hafa ny fahaiza-mamorona  hita tanatin'ilay hetsi-panoherana nataony raha iny zareo nandeha iny; fanehoankevitra mihetsika, nankaherezin'ny zavanisy. Niangavy antsika “hihaino ireo siantifika” i Greta Thurnberg, ilay Soedoazy mpikatroka mafana fo ho an'ny toetrandro. Saingy ahoana raha toa ka ampanginina amin'ny fomba mivantana na ankolana ireo feo ilaintsika henoina?
Afaka ampanginina amin'ny alalan'ny sivana, na alentika anatin'ny ranoben'ny filazana vaovao tsy marina ireo feo ireo. Fa anatinà tranga maro tsy mitsaha-mitombo, ny famonoana no tetika fampanginana ampiasaina. Famonoana tsy misy vokany. Famonoana amin'ny fomba tsimatimanota.
Nanambara ny fandalinana  feno iray navoaka ny volana Aogositra 2019 fa nitombo avo roa heny ny famonoana ireo mpikatroka mafana fo ho an'ny tontolo iainana tanatin'ny 15 taona lasa. Tanatin'ny 90% tamin'ireo tranga ireo, tsy nisy olona voaheloka – haavonà tsimatimanota mampivarahontsana.
Amin'izao fanamarihantsika Andro Iraisam-pirenena iray hafa natao Hanatsaharana ny Tsimatimanota ho an'ireo Heloka bevava Atao Amin'ny Mpanao Gazety izao, tsy lavitry ny saintsika ity endrikà sivana mahafaty ity.
Fampahatsiahivana mahatonga saina ilay lisitry ny UNESCO mirakitra ireo mpanaogazety novonoina naneran-tany — maherin'ny arivo nanomboka tamin'ny 2006. Nitombo ihany koa ny tahàn'ireo vehivavy lasibatra , ireo vehivavy mpanao gazety ireo izay miatrika fanafihana tsy mitsaha-mitombo, mifantoka amin'ny maha-vehivavy azy.
Tamin'ireo mpanaogazety 207 novonoina teo anelanelan'ny Janoary 2017 sy Jona 2019, mihoatra ny antsasany no teo am-pitaterana mikasika ny heloka voarindra, ny politika tao an-toerana ary ny kolikoly.
Natsahatra, mandrakizay, ny zon'izy ireo haneho hevitra mba hisakanana azy ireo tsy hizara vaovao.
Isaky ny tsy voasazy ny heloka toy izany dia manamafy ireo hafa. Mety hanontany tena ireo hizara vaovao ho an'ny tombontsoam-bahoaka hoe: mendrika ny hamoizako ny aiko ve izany? Mendrika ny hampidirako loza ho an'ny fianakaviako ve izany? Ary raha toa ka manapa-kevitra izy ireo fa tsia, tsy mendrika ireo, iza no afaka hanome tsiny azy? Tsy misy fetrany ireo vokatra mifampitaritarika ateraky ny tsimatimanota.
Izany no antony nanaovan'ny IFEX hetsipanentanana, efa ho valo taona mahery izay, hanajanonana ny tsimatimanota ho an'ireo heloka bevava atao amin'ireo mpanao gazety sy ireo rehetra mampiasa ny zony haneho hevitra malalaka.
Tsy asa mitondra fahombiazana haingana izy io. Toy ilay ohapitenenana hoe, hazakazaka lavitra ezaka io fa tsy riotra. Tsy mifarana eo amin'ny fitadiavana ireo nahavanon-doza irery ihany ny asa; tsy maintsy raisina ho tompon'andraikitra noho ny famelàna na fankaherezana tontolonà tsimatimanota izay hivoaran'ny heloka toy izany ireo fanjakana.
Mankasitraka izay fandresena rehetra izahay, na kely na lehibe. Ny vaovao tsara dia mahita paikady vaovao feno hery famoronana, ifandrimbonana sy matanjaka, ary fivoarana azo tsapain-tanana izahay ao amin'ny IFEX.
Tao anatin'ny 12 volana lasa, hitantsika nivoaka ihany ny marina  tany Gambia mikasika ilay famonoana ny mpanaogazety Deyda Hydara tamin'ny 2004; didim-pitsaràna manan-tantara navoakan'ny  Fitsaràna Iraisan'ny Amerikana ho an'ny Zon'olombelona izay niampanga ny governemantan'i Kolombia ho tompon'andraikitra tamin'ny famonoana an'i Nelson Carvajal Carvajal tamin'ny 1998; ary ny fanapahankevitra ara-tantara  noraisin'ny Vaomiera Iraisan'ny Amerikana hampiakatra anoloan'ny fitsaràna ilay trangàna fanafihana mahery setra tamin'ny volana Mey 2000 izay saika nahafaty ny mpanaogazety mpanadihady, Jineth Bedoya Lima.
Vao roa herinandro monja izay no nandraisantsika ny fanapahankevitr'i Kyrgyzstana ny hanokatra indray ny raharaha mikasika ny famonoana ilay mpanao gazety Alisher Saipov, efa ho 12 taona lasa izay, taorian'ny famoretana miziriziry nataon'ny IFEX sy ireo mpikambana ao aminy any an-toerana, ny Media Policy Institute sy ny Public Association Journalists.
Eritrereto anie e, maneho 66 taonanà tsimatimanota ireo tranga ireo.
Koa avelao ireo tomponandraikitra — na ireo mpitazana — ny herisetra atao amin'ireo mpanaogazety haheno ity mafy sy mazava tsara: fotoana ela taorian'ny nitodihan'ny mason'izao tontolo izao, mety hieritreritra ianareo fa afaka madiodio tamin'ny famonoana. Tsia. Maharitra ireo sasany aminay izay nanolo-tena ny hiady amin'ny tsimatimanota. Tsy kivy izahay. Ka tsy ho afaka ny hiala sasatra mora mihitsy ianareo.
Ho anay, iray amin'ireo singan-drahona lehibe amin'ny fahalalahana maneho hevitra maneran-tany ilay kolontsain'ny tsimatimanota manodidina ireo fanafihana mpanaogazety. Tsy ho nisy mihitsy ireo fivoarana vitantsika manoloana ny fanatsaharana ny tsimatimanota raha toa ka tsy nisy ny fahafanoherana, ny fikirizana ary ny fifoforan'ireo izay miady amin'izany.
Tsy maintsy mampiasa ny fahalalahantsika maneho hevitra isika mba hiarovana izany. Tsy maintsy mampiasa izany isika mba hanabaribariana ireo heloka atao amin'ireo mpanaogazety sy mba hanatsaharana ny tsimatimanota.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/17/144474/
 fanafihana ireo mpanao gazety: https://ifex.org/cameroonian-government-urged-to-assist-in-curbing-ongoing-attacks-on-journalists-and-activists/
 fanaovana fanahy iniana ny filazana vaovao diso: https://ifex.org/disinformation-elections-fact-checking-and-beyond-the-view-from-latin-america/
 fanakatsakanana ireo gazety: https://ifex.org/the-newspapers-that-never-arrive/
 nidina an-dalambe: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/27/climate-crisis-6-million-people-join-latest-wave-of-worldwide-protests
 tahàn'ireo vehivavy lasibatra: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/214/82/PDF/G1821482.pdf?OpenElement
 nivoaka ihany ny marina: https://ifex.org/15-years-later-killers-of-deyda-hydara-are-revealed/
 didim-pitsaràna manan-tantara navoakan'ny: https://ifex.org/a-new-path-to-justice-in-latin-america-inter-american-court-sets-historic-precedent-in-case-of-journalist-assassinated-in-colombia/
 fanapahankevitra ara-tantara: https://ifex.org/colombia-to-face-judgement-in-case-of-journalist-jineth-bedoya-a-historic-moment-that-will-frame-both-the-past-and-future/